Talooyinka Muhiimka ah ee Guurka Ka Hor! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
BBC Somali — July 24, 2020
Marwo Ababa G/sillaase iyo Seygeeda Gabre Kiristos waxay isqabeen ama ay noolal wadaag ahaayeen 50 sano. Dhawaanna waxay xuseen sanad guuradii 50aad ee guurkooda ka soo wareegtay iyada oo munaasabaddaasina ay ka soo qayb galeen 9 carruur oo ay dhaleen iyo 17 carruur oo ay carruurtooda sii dhaleen.
Waxayna qoysaskaasi nus qarniga noolasha ku mideysnaa ay sheegayaan iney muddo intaa dhan ay wada noolaadaan ay ugu wacneed “Samir iyo Iisu dulqaadasho”. “Labada qof ee isqaba ama wada nool midkood inuu khalad ka dhaca waa lagama maarmaan balse iney khaladka dhacay si deggan ay u xalliyaan ayaa u horseedaya iney noolal farxad leh ay ku noolaadaan” ayey tiri Marwo Ababa.
Bariyahan dambana waxaa aad u badan qoysas wada nool oo aan aarimaha qoyskooda ka wada hadli karin, kuwa u wada nool carruurta iney wada korsadaan oo keli ah, ama aan kalsooni isku qabin. Haddaba isfaham la’aanta noocaasi marka uu sii ballaadho wuxuu horseedayaa qoysaski dhisnaa iney burburaan oo la kala tago.
Mar wax laga weydiiyey waxyaabaha guurka khatarta geliya ee burburka horseeda waxay sheegeen iney kow ka tahay aqoonta ay lammaanuhu u leeyihiin guurka iyo xiriirka jeceyl waxa ay kala yihiin. “Guurku wuxuu ka billaabmayaa qofka laftiisa” marka inta uusan qofku fiirin qofka uu noolasha la wadaagayo waa inuu marka hore isagu is fiiriyaa, ayey Tiri Khabiir Tigist.
Dhibaatooyinka kale ee guurka iyo xiriirka jeceyl ee lamaanaha khatar gelin kara waxaa ka mid ah:
Aragtida ay dadku guurka ka qabaan oo khaldan
Dhaqaala yari soo food saarto guurka kaddib
Kala duwanaashaha dhaqanka labada qof
Heerka waxbarasho oo kala duwan
Dabeecadda rasmiga oo qofkba qofka kale ka qariyo iyo
Been la iisu sheego
Marwo Ababa waxay sheegtay Soddohdeed iyo Soddoggeed oo ay u aqbashay una soo dhaweeysay sida labadeyda waalid inuu qayb weyn ka qaatay iney guur farxad leh oo muddo dheer soo jira ay nasiib u yeelato. Ragga iyo dumarkaba marka ugu horreysa oo ay noolasha ku midoobaan waxay isku dayaan midba midka kale inuu isku dayo inuu iisu muujiyo sida malaa’igti oo kale oo qof wanaagsan uu iisu muujiyo balse xaalku dib ayuu ka xumaanayaa. “Dhibaatooyinka iyo dabeecadaha qarsoon ee dhabta ah oo uu qofku leeyahay oo dhan dib ayey ka soo baxayaan, maadaamaa inta la wada nool yahay noolasha wax badan oo wanaag ama xumaan ah lagala kulmayo” ayey tiri.
“Dadka doonayo iney reer yagleelaan sida ay jeebkooda iyo akaawunka bangigooda u eegaan, waa iney dib u fiiriyaan aragtida qofka iyo waxa uu naftiisu ka aaminsan yahay” ayey tiri Tigist. Dhibaatooyinka ugu badan ee sii huriyay dhibka qoysaska ka dhex dhaca ayaa sida oo kale la sheegaa iney ugu wacan tahay ururro ama hay’ado arrimaha guurka bulshada kala taliyo oo aan jirin haddii ay jiraan ay awooddooda kooban tahay.
Qoysaska isguursanaya inta aysan guurka guda gelin ka hor waa iney wada fariistaan oo si cad ay arrimahan u qorsheystaan:
Qoyska ay doonayaan iney dhistaan
Hadafka ay qoyska u dhisayaan
Muhiimadda qoysku uu leeyahay
Waajibaadka saaran labad qof
kaalinta iyaga kaga aaddan sida ay uga soo baxayaan iwm
Haddii ay sidaa sameyn waayaan dhibaatooyinka guurka kaddib yimaaddo xallintooda qof ayey dusha ka fuuleysaa marka uu qofkaasi u dulqaadan waayana wuxuu u horseedaya inuu qoyska burburo. “Guurku sidiisaba waxaa lagu hagaa aqoon, karti iyo dulqaad” ayuu yiri Khabiir Indaalki.
Haddaba aqoonta guur ee loo baahan yahay waa iney su’aalahan ka jawaabaan:
Sidee loo hagaa/maamulaa?
Maxaa looga baahan yahay?
Ninku muxu doonayaa?
Gabdhu maxay dooneysaa?
Labadaba maxay doonayaan oo ay ka wada siman yihiin
Maxaa laga ilaaliyaa?
Haddaba aqoonta halkee laga helaa?
Dadki hore inta ay reer yagleelin ka hor waxay aqoonta guurka ka korosan jireen dadka ka waaweyn iyo waaliddiintooda iyaga oo weydiiyo guurka waxa uu yahay iyo maareynta uu u baahan yahay.
Aqoonta ugu badan waxaa laga helaa:
Diinta uu qofku aaminsan yahay
Qaab dhismeedka bulshada ay labada qof ka soo jeedan
Qoysaska muddo badan soo wada noolaa oo waaya aragnimadooda laga qaato
Khubarada arrimaha guurka la taliyo oo lala tashto
“Guurka ujeeddadiisu iney ka ballaadhan tahay in guri lagu wada noolaado ama ubad la dhalo oo keli cid labada qof ee isguursaneyso kala taliyana waa lo baahan yahay” ayey tiri Tigist. Labada qof ee isguursaneysa oo dabeecadahooda rasmiga ah oo ay leeyihiin ilaaheyna uu ku abuuray aan kala qarsan oo iisu sheego waxay iyaduna gacan ka geysaneysaa qofka marka uu wax ku saabsan dabeecaddiisa kala kulmo qofka kale iney ku soo boodda ku noqoneyn maadaamaa uu horay ugu sheegay dabeecaddiisaasi.
Waxayna khubaradu ku talinayaan labada qof inta ay isguursan ka hor iney iyagu maskax ahaan isa soo dhisaan iney wax walba ka wanaagsan tahay.
Maxay yihiin dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay la kulmaan qoysaska?
Tigist iyo Indaalki oo muddo 10 sana ah arrimaha qoyska bulshada kala soo talinayey ayaa waxay sheegayaan muddadi ay howshan ku soo jireen dhibaatooyinka ugu badan ee ay qoysaska ula yimaaddaan ee ay xalliyeen waxa ay yihiin.
Fara gelinta ehelada labada qof
Qofka oo wixi uu iska aaminsanaa hoos uga dhaca
Xiriirka galmo ee ka dhaxeeya
Dabeecadaha oo la isku keenin iwm.
“Labada qof ee sida dhabta ah iisu jecel jeceylkooda ay keydiyeen waxay la soo baxaan xilliga dhibka uu yimaaddo” ayey leeyihiin khubarada arrimaha guurka ku takhasusay.
Labada qof ee isguursanaya waa iney lahaadaan hadaf mideysan, haddiise hadafkoodu uu marki horaba mideysneyn muddo marka la wada noolaado aragtida ayaa lagu kala duwananaanayaa taasoo ugu dambeynti khilaaf uu ka dhalan karo. Hadafkoodu ugu weyna waa iney ka dhigaan mar weliba iney dhisaan naftooda, dabeecadahooda, hab dhaqankooda iyo wax kasta oo wada noolaashahooda sii xoojin kara. Wax la dhisana waxaa ugu wanaagsan jeceylka ay lammaanaha iisu qabaan, maadaamaa jeceylku uusan marnaba duugoobin isla-markaana uu dhammaan, waxa ka soo hara oo dhan ay dhammaanayaan ayna isbeddelayaan.
Tags: Talooyinka muhiimka ah ee guurka ka hor!
Next post Miriam Menkin: Gabadha seynisyahka ah ee aragtay mucjisada taranka bani'aadanka.
Previous post Waa Kuwee Cunnooyinka Aan Loo Ogaleyn Inay Cunto Hooyada Xilliga Uurka Leedahay?